YEYINTNGE(ကနဒေါ): Wednesday, September 16
Protest at the UN Headquarters for 2nd Anniversary of Saffron Revolution
Monks and Democratic Forces for Burma will be holdinga2nd Anniversary remembrance of the 2007 Saffron Revolution/protest in front of the UN Headquarters.
In September 2007, tens of thousands of monks and citizens demonstrated across Burma (Myanmar). The peaceful protests, dubbed as “Saffron Revolution” after the color of robes worn by Buddhist monks who playedaleading role, were Burma’s largest anti-regime movement in two decades.
Burma’s brutal military regime crushed peaceful protesters with overwhelming forces. They were beaten badly, some shot dead and thousands were detained. Despite over 2,000 political prisoners still held in inhumane conditions throughout Burma’s notorious prisons - arbitrary arrests, detentions, and disappearances continue as we stand here today, many Burmese remained committed to march toward freedom and democracy.
Location: UN Headquarters - Dag Hammarskjold Plaza
(E 47th Street, between 1st Ave and 2nd AVe)
Contacts: U Pyinnya Zawta 415-518-7663, Nay Tin Myint 510-491-5157 Email: uscb.ny@gmail
Organized and sponsored by Monks and Democratic Forces for Burma along with Iran and Tibet freedom movements.
BY YeYint Nge ... 9/16/20090comment
ဒေါ်စုနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံး လွှတ်ပေးဖို့ လူ့အခွင့်အရေး မဟာမင်းကြီး တောင်းဆို
U.N. High Commissioner for Human Rights, South African Navanethem Pillay, September 14, 2009.AP
စက်တင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၉။
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး နာဗီ ပီလေး (Navi Pillay) က ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့ ဉာဉ်ဆိုးကြီးကြောင့် ကမ္ဘာတ၀န်းမှာ လူသန်းပေါင်းများစွာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ခံနေရတယ်လို့ ၁၂ ကြိမ်မြောက် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ ညီလာခံမှာ အင်္ဂါနေ့က ပြောကြားသွားပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု အမျိုးမျိုးရှိရာမှာ လွတ်လပ်မှုကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသူ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ မတရားမှုတွေ အကြောင်းကိုလည်း မစ္စ နာဗီ ပီလေးက မီးမောင်းထိုး ပြောသွားပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ဒေါ်လှလှသန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး နာဗီ ပီလေးက သူ ရာထူးလက်ခံပြီး တနှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ အခုလို အဖွဲ့ဝင် ၄၇ နိုင်ငံပါ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီရဲ့ ၁၂ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံမှာ ကမ္ဘာတ၀န်းမှာ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်မှုများကို လျာထား ဖော်ပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု အမျိုးမျိုးတို့နဲ့ ပတ်သက်လို့ သူက တိုင်းရင်းသားတွေ၊ အမျိုးသမီးတွေ၊ လူမျိုးခြားတွေအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့ ဉာဉ်ဆိုးအကြောင်း၊ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာ ဒေသတွေမှာ အရပ်သားတွေအပေါ် ကြီးလေးတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ကျူးလွန်တဲ့အကြောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာတွေကြောင့် လူတွေရဲ့ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးတွေ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့ အကြောင်းနဲ့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် သွားရောက်တဲ့ ပြောင်းရွှေ့အလုပ်သမားတွေ၊ ဒုက္ခသည်တွေ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ခံနေရတဲ့ အကြောင်းအပြင် လွတ်လပ်မှုကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ရှေးရှု ဆောင်ရွက်ကြသူတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြသူတွေ၊ အာဏာရှင်တွေကို ဝေဖန်ထောက်ပြကြသူတွေ အနေနဲ့ ဖမ်းဆီး အကျဉ်းချခြင်း၊ ပြန်ပေးဆွဲခံရခြင်း၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ထောင်ဒဏ်ကျခံရခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း စသည်တို့ကို ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုပြီး သူက ပြောကြားသွားပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားကြသူတွေ ဖိနှိပ်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ တရားနည်းလမ်းမကျ အရေးယူ အပြစ်ပေးမှုတွေ အကြောင်းကို သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာ မစ္စပီလေးက အခုလို မီးမောင်းထိုးပြသွားပါတယ်။
“မြန်မာအာဏာပိုင်တွေက နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မကြာသေးမီက ထောင်ဒဏ် စီရင်ချက်ချပြီး ဆိုင်းငံ့အမိန့်နဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် နောက်ထပ်ဆက်ချထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ကျမတို့တွေအားလုံး အံ့အားသင့် တုန်လှုပ်မိကြပါတယ်။ တခြား နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂,၀၀၀ ကျော်တို့နဲ့အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မတရားဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ထားတာဟာ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလကို ဖော်ဆောင်နေပါတယ်လို့ ဆိုတဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရက ပေးထားတဲ့ကတိကို ကိုယ်တိုင် ပြက်ရယ်ပြုရာ ရောက်စေပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကို ချက်ချင်းနဲ့ ခြွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ကျမတို့ တောင်းဆိုပါတယ်။” လို့ မစ္စပီလေးက ပြောသွားပါတယ်။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံစဉ် တားမြစ်မိန့် ချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီး မေလက အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန် ယက်တော (John Yettaw) အင်းလျားကန်ကတဆင့် ရေကူးပြီး နေအိမ်ဆီကို လာရောက်ခဲ့ရာမှာ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှု အကြောင်းပြချက်ကြောင့် လူသားချင်း စာနာမှုအရ မစ္စတာယက်တောကို နေခွင့်ပြုမိတဲ့အတွက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် အနေနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ပြီးခဲ့တဲ့လက စီရင်ခြင်း ခံခဲ့ရပြီး ဆိုင်းငံ့အမိန့်နဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ၁၈ လ ပြောင်းလဲ ချမှတ်ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုစဉ်ကလည်း ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး မဟာမင်းကြီး မစ္စပီလေးက အခုလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် မြန်မာစစ်အစိုးရက တရားနည်းလမ်းမကျ ဖမ်းဆီးပြီး သူမကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုမှ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း မရှိတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေအပေါ် အခြေခံပြီး စွဲချင်တင်ခံရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း မစ္စပီလေးအနေနဲ့ သိပ်ကို စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ထံကို သူတို့ရဲ့ သဘောထား အမြင်တွေကို စာရေးသား ပေးပို့ခဲ့လို့ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် စီရင်ခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ NLD လွှတ်တော်အမတ် ၂ ဦး အပါအ၀င် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကျန်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးတို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ မစ္စတာဘန်ကီမွန်း (Mr. Ban Ki-moon) နဲ့အတူ ထပ်လောင်း တောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလည်း မစ္စပီလေးက ထိုစဉ်က သူ့ရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာ ဖော်ပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၂ ကြိမ်မြောက် လူ့အခွင့်အရေး ညီလာခံမှာ သူပြောကြားတဲ့ မိန့်ခွန်းမှာတော့ မစ္စပီလေးက လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေကို အကာအကွယ် ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အစိုးရတွေမှာ တာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်း၊ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲများမှာ ပါဝင်နိုင်ခွင့်နဲ့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားခွင့်တို့ဟာ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အနေနဲ့ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးရမယ့်တာဝန် ရှိတဲ့အကြောင်းလည်း ပြောကြားသွားပါတယ်။
“လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အနေနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို ဆက်ပြီး ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ဖို့က လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်ပွားနေတာကို တွေ့ရင် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒီအကဲစမ်းမှုကို လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက ရင်မဆိုင်နိုင်ဘူး၊ တာဝန်မယူရဲဘူးဆိုရင် ကုလသမဂ္ဂ အပေါ်မှာနဲ့ အထူးသဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အပေါ်မှာ အားကိုးအားထားပြုကြတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရသူ အားလုံးအပေါ် တာဝန်မဲ့ရာ ရောက်ပါလိမ့်မယ်။” လို့ မစ္စပီလေးက ပြောကြားသွားပါတယ်။
Protest at the UN Headquarters for 2nd Anniversary...
ဒေါ်စုနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံး လွှတ်ပေးဖို့ လ...